အောင်မြင်သော အရောင်းအ၀ယ်သမား၁ဦး၏ အရည်အသွေး ၈ချက်
ရောင်းဝယ်သူတော်တော်များများက အမြတ်ရနိုင်တဲ့ဗျူဟာများက သူတို့ကိုအောင်မြင်မှုရစေလိမ့်မည်လို့ယူဆကြတယ်။ သို့သော်လည်း အရောင်းအဝယ်ရဲ့အဓိကက လူပဲဆိုတာမေ့နေကြတယ်။ ဘာလို့ တူညီတဲ့ဗျူဟာသုံးတဲ့သူတွေမှာ ရလဒ်တွေကွဲကြတာလဲ? အားလုံးကသူတို့ရဲ့ အပြုအမူနဲ့ သဘောထားပေါ်မူတည်နေကြပါတယ်။ အောင်မြင်တဲ့ရောင်းဝယ်သူများ၏ အသုံးအဝင်ဆုံး အရည်အသွေးများကို စုစည်းပေးထားပါတယ်။
သင့်ဗျူဟာက အထူးအမြတ်အစွန်းရစေနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ကိုယ့်လှုပ်ရှားမှုအပေါ်ကိုယ်မသေချာရင် သေချာပေါက်ရှုံးပါလိမ့်မည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သင့်နည်းပရိယာယ်ကိုလိုက်နာပါ။ အရောင်းအဝယ်က အမြတ်မရဘူးလို့ထင်ရင်လည်း သင့်ပစ်မှတ်ကို မပြောင်းလိုက်ပါနဲ့။ ကိုယ့်အရောင်းအဝယ်စနစ်ကိုသေချာတယ်ဆိုရင် ဘယ်ဟာမှသင့်ကို မနှောင့်ယှက်နိုင်ပါဘူး။ ယုံကြည်စိတ်ဆိုတာ အဆက်မပြတ်လေ့ကျင့်မှုကနေ လာတယ်ဆိုတာ မှတ်ထားပါ။
ဈေးကွက်ရွေ့လျှားမှုကို ၁၀၀% အတိအကျ ခန့်မှန်းလို့မရပါဘူး။ ဘယ်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုမဆို ပြင်ထားသင့်ပါတယ်။ မဟုတ်လျှင် ကြောက်စိတ်က ဆုံးဖြတ်ချက်အမှားတွေ ချမိစေလိမ့်မည်။ အောင်မြင်တဲ့ရောင်းဝယ်သူတိုင်းဟာ ဈေးကွက်က သူတို့ထင်တာနဲ့ဆန့်ကျင်သွားရင် ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာ သိတတ်ကြတယ်။ ဈေးနှုန်း၏ ဖြစ်နိုင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုအားလုံးကို သတိပြုပြီး၊ စိတ်ငြိမ်ငြိမ်ထားပါ။
ဒါဟာရူးနှမ်းတယ်လို့ထင်ရပေမယ့် ရောင်းဝယ်သူအများစုက၊ အထူးသဖြင့် လူသစ်တွေက ဒီရိုးရှင်းတဲ့အချက်ကိုမေ့နေတတ်ကြတယ်: သင်နေတတ်သလိုနေပါ!
အရောင်းအဝယ်ဟာ ရောင်းဝယ်သူ၏စရိုက်ကို ထင်ဟပ်စေပါတယ်။ ရောင်းဝယ်သူတိုင်းမှာ သူ/သူမ၏ ကိုယ်ပိုင်အရောင်းအဝယ် ပန်းတိုင်များရှိကြတယ်။ ရလဒ်အနေနဲ့ ဈေးကွက်မှာ သူ/သူမ၏အပြုအမူဟာ ထိုပန်းတိုင်များနောက်ကိုလိုက်ပါတယ်။ သူများရဲ့ဗျူဟာကို နားမလည်ဘဲ လိုက်လုပ်ရင်၊ ရှုံးနိုင်ခြေရှိပါတယ်။ သင့်ကိုယ်ပိုင်ရည်မှန်းချက်မှာ အာရုံစိုက်ထားပြီး၊ သင်ဘယ်လောက်စွန့်စားနိုင်မလဲ ဆုံးဖြတ်ပြီး၊ ဆက်ပြီးလေ့လာသင်ယူပါ။
ယခင်ထုတ်ပြန်ချက်အတွက် အပိုဆောင်းအကြံဥာဏ်: မှီခိုခြင်းကင်းပါစေ ။
မီဒီယာက ကျွန်ုပ်တို့အမြင်များနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များကို တော်တော်လွှမ်းမိုးပါတယ်။ သို့သော်လည်း အရောင်းအဝယ်လုပ်နေစဉ်တော့ ဒီဆူညံသံတွေကို လစ်လျူရှုထားပြီး ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်သာ စွဲမြဲနေပါစေ။ ပြင်ပလွှမ်းမိုးမှုတွေကို ရှောင်ရန်၊ ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံကို တိုးတက်အောင်လုပ်ပါ: သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေကို ဈေးကွက်ကဘယ်လိုသက်ရောက်မှုရှိလဲ စောင့်ကြည့်ပြီး၊ ဘယ်နည်းပညာပုံစံက တကယ်အလုပ်ဖြစ်လဲဆိုတာ ခြေရာခံလေ့လာပါ။ ဤလေ့လာစူးစမ်းမှုများက ဈေးကွက်ကိုသုံးသပ်တဲ့ စွမ်းရည်နှင့် ကိုယ်ပိုင်သုံးသပ်ချက်များ ပြုလုပ်ခြင်း အစွမ်းကိုပေးပါလိမ့်မည်။
တစ်သီးတစ်ခြားဖြစ်ခြင်းကို အတ္တနဲ့တော့ မရောထွေးလိုက်ပါနဲ့။ ဒီပြဿနာက အထူးသဖြင့် လူသစ်တွေနဲ့ပတ်သတ်နေပါတယ်။ ပထမအမြတ်ရတဲ့ အရောင်းအဝယ်ပြီးတဲ့အခါ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဂုရုကြီးတွေ၊ ဘယ်လိုရောင်းဝယ်ရမလဲ သိတဲ့သူတွေလို့ မှတ်ယူတတ်ကြပါတယ်။ သို့သော်လည်း ဒီလိုထင်မြင်ချက်တွေက အရှုံးတွေနဲ့ကြုံရစေနိုင်ပါတယ်။ ဈေးကွက်ဦးတည်ရာကို မပြောင်းလဲနိုင်ဘူးဆိုတာ သင်နားလည်သဘောပေါက်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဈေးက သင်ယူဆတဲ့လမ်းအတိုင်းမရွေ့ဘူး၊ အခိုင်အမာ သက်သေများက ဦးတည်ရာဈေးလမ်းကြောင်းအသစ်ကို အတည်ပြုထားတယ်ဆိုရင်၊ သင့်အရောင်းအဝယ်အကြံဥာဏ်ကို ပြောင်းလဲလိုက်ဖို့ တွန့်ဆုတ်မနေပါနဲ့၊ ဒါမှ အရှုံးတွေမထပ်စေမှာပါ။
အောင်မြင်တဲ့ရောင်းဝယ်သူတိုင်းက အမြဲသူတို့စွမ်းရည်ကိုတိုးတက်စေပါတယ်: လေ့လာတာ ဘယ်တော့မှမနားဘူး။ သင့်အရောင်းအဝယ်စွမ်းရည်ကို တိုးတက်အောင်လုပ်ရန် အလွယ်ဆုံးနည်းကတော့ ယခင်အရောင်းအဝယ်များကို ပြန်သုံးသပ်ခြင်းပါပဲ။ ထို့အပြင် အောင်မြင်တဲ့ရောင်းဝယ်သူများရေးထားတဲ့ စာအုပ်များများဖတ်ပြီး၊ နည်းပညာသုံးသပ်ချက်၏ လက္ခဏာအသစ်များကို သင်ယူပါ။
ယခင်အကြံပြုခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ ယခင်အရောင်းအဝယ်များကို သုံးသပ်ခြင်းဖြင့် သင့်စွမ်းရည်ကို တိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါလုပ်ရန် မှတ်သားထားပါ။ သင့်လှုပ်ရှားမှု၊ အမြတ်များနဲ့ အရှုံးများကို ချမှတ်ထားပါ။ ဒါဟာ အနာဂတ်မှာ သင်အမှားတွေရှောင်နိုင်အောင် ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။
အကောင်းမြင်တဲ့သဘောထားနဲ့သာ အောင်မြင်တဲ့ရောင်းဝယ်သူတစ်ဦးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အရောင်းအဝယ်ဆိုတာ အရှုံးမရှိဘဲ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ သင့်အနှုတ်လက္ခဏာပြနေတဲ့ အမြတ်တွေကို လွန်ကဲစွာတုန့်ပြန်လျှင် သင့်အရောင်းအဝယ်အတွက် မလုံခြုံမှုဖြစ်စေလိမ့်မည်။ အရှုံးတွေကို သင်ခန်းစာကောင်းတစ်ခုအနေနဲ့သာ ဆင်ခြင်သင့်ပြီး၊ အာရုံစိုက်မထားသင့်ပါဘူး။